Homeसमाचारअनिसाको गो’प्य च्याट, कल र म्यासेज बाहिरियो ! (भिडियो हे’र्नुहोस)
March 12, 2021 admin समाचार 4105
काठमाडौँ। जिल्लाको क’पन स्थित चुनिखेलमा पौष १९ अनिसा कुमाल र कन्चन तिमल्सिनाले बि:बाह गरेका थिए तर केटीको माइती पक्षको का’रण कन्चनले बि’ष से’वन गरेका छन । केटिले सि’न्दुर लाउन ह’तार लाएपछि दुबै’जनाले ‘घरमै सि’न्दुर हालेर बि’बाह गरेका थिए ।
के’टिपक्षको मा’निसले दुबैको सम्बन्ध स्वीकार गर्छौ भनेर बोलाएर चौ’कीमा लगी कु’टपिट ग’राएकोले उनि यो पि’डा स’हन न’सकेर युवकले बि ‘ष सेवन गरेको बताएका छन । यस बिबाहको सि’न्दुर हा’लेको फोटो सा’माजिक सं’जाल फे’सबुकमा सा’र्बजनिक गरेका थिए ।
सा’र्बजनिक गरेको फोटो देखे पछी केटी’को मा’इती प’क्षले दु’इ जनाको बिबाह स्वी’कार गर्ने र टि’काटालो गर्ने भन्दै बो’लाएर छोरीलाई घर रा’खेर क’न्चनलाई भने प्र’हरी चौ’की लगिएर कु’पिट ग’राएपछी उनले आफ्नो घर आएर बि’ष पि’एको उनको आ’फन्तको भनाइ रहेको छ । – ओएस नेपालबाट
दरवारमा त्यो रात के के भएको थियो ? त्यहाँ काम गर्नेहरुले देखेको कुरा यसरि ब’ताए (भिडियो सहित)
October 29, 2020 admin समाचार 7789
September 6, 2020 admin समाचार 12285
December 13, 2020 admin समाचार 5563
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (220449)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (206729)